Nudgify: Khulisa ukuguqulwa kwakho kwe-Shopify Ngale Nkundla Yokuqinisekisa Ubumbano Lomphakathi | Martech Zone
Inkampani yami, Highbridge, isiza inkampani yezemfashini ukwethula i- ngqo-kumthengi isu lasekhaya. Ngoba bayinkampani yendabuko enikezela abathengisi kuphela, babedinga umlingani ozosiza abe yingalo yabo yezobuchwepheshe futhi abasize ngayo yonke imikhakha yentuthuko yabo yomkhiqizo, i-ecommerce, ukucubungula ukukhokha, ukumaketha, ukuguqulwa nezinqubo zokugcwaliseka.
Ngoba banama-SKU anomkhawulo futhi abanawo umkhiqizo owaziwayo, sibaphusile ukuthi baqalise endaweni yesikhulumi ebesilungile, esesabekayo, futhi ebidinga ukutshalwa kwezimali okuncane ngaphezulu kwesitaki esenziwe ngokwezifiso ngokuphelele… sikhethe Thenga.
Ngoba baqala leli bhizinisi kusuka ekuqaleni, ukuthola ukwethenjwa kwezivakashi zethu kuzobucayi. Kanye necebo lobudlelwano bomphakathi, ukumaketha okuzenzakalelayo (nge Klaviyo). Besidinga i- ubufakazi bezenhlalakahle Isixazululo esihlangana ngokukhululekile ne-Shopify.
Buyini Ubufakazi Komphakathi?
Ubufakazi bezenhlalo kuyinto yezenhlalo lapho abantu bekopisha izenzo zabanye ngomzamo wokuziphatha esimweni esithile. Ngamafuphi, ngabantu abenza lokho ababona ukuthi abanye abantu bakwenza. Ukuphepha ngezinombolo.
URobert Cialdini, Ithonya, I-Psychology of Persuasion
Ngamasayithi e-ecommerce, ngibonile umsebenzi wobufakazi bezenhlalo ngaphezu kwezivakashi ezikopishelana zodwa. Ubufakazi bezenhlalo buhlinzeka ngezinye izindlela zokushayela ukuguqulwa:
Trust - Ukubona ukuthi ezinye izivakashi ziyapheqa futhi ziyathenga kuyinkomba enamandla yokuthi umkhiqizo, umkhiqizo noma isayithi lingathenjwa.
Ukuphuthuma - Kumasayithi aneqoqo elilinganiselwe, izivakashi zikhuthazwa ukuguqula ngokushesha kunokulinda. Ukwesaba Ukuphuthelwa (FOMOkuyindlela enamandla yokuguqula.
ukuthandwa - Ngokukhangisa imikhiqizo ethengisa kakhulu, isivakashi esingaqiniseki sizothambekela kakhudlwana ekuthengeni uma sibona ukuthi abanye bakwenzile lokho.
Izipesheli - Ingabe unayo ukuthengisa noma isaphulelo esisebenzayo njengamanje? Ukudala lawa ma-Nudges kungashayela amazinga wokuguqulwa kokunikezwayo okudumile onakho.
Ukuzuza - Noma isivakashi sakho singakulungele ukuthenga, ungaphinda ucindezele izivakashi ukuthi zikhethe ukungena kuzipesheli, izincwadi zezindaba, noma nemiyalezo ebhaliwe.
Qoqa isivele isize amawebhusayithi angaphezu kwe-1,800 emazweni angaphezu kwama-83 ukuthi akhuphule amazinga wokuguqulwa kwawo - ngaphandle kwedatha yesikhathi sangempela. Izici zepulatifomu yabo ebanzi zifaka:
Umsebenzi wakamuva - ukuvaliwe ukuguqulwa kwakamuva noma ukubhaliswa kwakamuva nokwandisa ukwethembana
Okuphakelayo Kwesitoko - Khombisa idatha yesitoko sangempela nge-feed ezenzakalelayo
Ukuzenzakalela kweFomu - Khombisa ngokuzenzakalela ukubhalisa okusha
Izifanekiso ze-Nudge - Ama-Nudges alungiselelwe ngaphambilini we-e-Commerce, Travel, SaaS nokuningi
Gudluza Umakhi - Yenza ama-Nudges amasha ngamagama akho nezithombe
Khombisa Imithetho - Nquma ukuthi yimaphi amakhasi namadivayisi ama-Nudges okufanele avele kuwo
Izilungiselelo Zokuziphatha - Setha inhlamvu, ukubambezeleka nobude bamaNudges akho ngokulungisa izilayida.
Dala imigomo - Setha ikhasi lakho lokuqinisekisa njengenhloso yokulandela ukuguqulwa okusizwayo. Sebenzisa izibalo ezakhelwe ngaphakathi ukwengeza futhi uthole ukuthengisa okuningi.
Izitayela Zokwezifiso - Lungisa izingqikithi zakho ukusetha ithoni elungile
Izilimi ze-29 - I-Nudgify isekela ngokugcwele izilimi ezingama-29 ezihlukene
Hudula bese ulahla imifula - Dala imifudlana futhi ubonise ama-Nudges akho ngokuhlelekile
Hlanganisa Izibalo - Thwebula ukuvakashelwa, ukuxhumana, kanye nokuguqulwa okusizwayo ukukala imbuyiselo kutshalomali lwakho lobufakazi bezenhlalo.
Ama-algorithm we-Nudgify aqhubeka nokufunda ukuthi i-Nudge iguqula kahle kakhulu esigabeni ngasinye sohambo lwamakhasimende. Uma usebenzisa isikhathi eside i-Nudgify, iba yigugu ngokwengeziwe.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Sokuqaqa
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Qoqa, Klaviyo, Thenga, kanye neAmazon nokusebenzisa lezo zixhumanisi kulo lonke lolu daba.
Tags: ukwesaba ukulahlekelwafomokhuphula izinga lokuguqulwakhulisa ukuguqulwakhulisa amanani wokuguqulwa kwe-ecommercekhulisa ukuguqulwa kwe-ShopifynudgenudgifyPsychologyi-pop yokuthengisaubufakazi bezenhlalakahlebuyini ubufakazi bezenhlalo